Lo Mgaqo-nkqubo wabucala ulawula indlela i-Fyrebox Quizz eqokelela, isebenzise, igcine kwaye ichaze ulwazi oluqokelelwe kubasebenzisi (ngalinye, "uMsebenzisi") kwiwebhusayithi ye-https: //www.fyrebox.com ("Indawo"). Lo mgaqo-nkqubo wabucala usebenza kwiSayithi kwaye zonke iimveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa yiFyrebox Quizzes
Ulwazi lokuzazisa lomntu
Singaqokelela ulwazi oluchongiweyo lwabaNtu kubasebenzisi ngeendlela ezahlukileyo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, xa Abasebenzisi betyelela indawo yethu, babhalisa kwisiza, sibeka iodolo, kwaye benxulumene neminye imisebenzi, iinkonzo, amanqaku kunye nezixhobo esizenzayo ziyafumaneka kwiSiza sethu. Abasebenzisi banokucelwa ukuba bafanele, igama, idilesi ye-imeyile, ulwazi ngekhadi letyala. Abasebenzisi banokuthi, nangona kunjalo, bayindwendwele indawo yethu ngokungaziwa. Siza kuqokelela ulwazi lwakho oluchaziweyo kuBasebenzisi kuphela ukuba ngaba ngokuzithandela bangenisa olo lwazi kuthi. Abasebenzisi banokuhlala benqaba ukunikezela ngolwazi lokuchonga, ngaphandle kokuba kunokubathintela ekubandakanyekeni kwimisebenzi ethile enxulumene neSayithi.
Ulwazi olungazisi mntu
Singaqokelela ulwazi olungelolwakho malunga nabasebenzisi ngalo lonke ixesha benxibelelana neSayithi yethu. Ulwazi olungelolwakho lungaquka igama lebrawuza, uhlobo lwekhompyuter kunye nolwazi lobuchwephesha malunga nendlela Abasebenzisi abanxibelelana ngayo neSayithi yethu, njengenkqubo yokusebenza kunye nabanikezeli beenkonzo ze-Intanethi abasetyenzisiweyo kunye nolunye ulwazi olufanayo.
Indawo yethu inokusebenzisa "ikuki" ukongeza amava omsebenzisi. Umkhangeli wewebhu wabeka iikuki kwi-hard drive yazo ukulungiselela iinjongo zokugcina irekhodi kwaye ngamanye amaxesha ukulandelela ulwazi ngazo. Umsebenzisi unokukhetha ukuseta ibrawuza yakhe ukwala iicookies, okanye ukuba akulumkise xa kuthunyelwa ii-cookies. Ukuba benjenjalo, qaphela ukuba ezinye iindawo zeSayithi zinokungasebenzi kakuhle.
Silusebenzisa njani ulwazi oluqokelelweyo
I-Fyrebox Quizzes inokuqokelela kwaye isebenzise ulwazi lomntu buqu ngezi njongo zilandelayo:
Ukuphucula inkonzo yabathengi
Ulwazi osinike lona lusinceda ukuphendula izicelo zakho zenkonzo yabathengi kunye neemfuno zenkxaso ngokufanelekileyo.
Ukwenza amava omsebenzisi
Sinokusebenzisa ulwazi oluhlanganisiweyo ukuqonda indlela Abasebenzisi bethu njengeqela abazisebenzisa ngayo iinkonzo kunye nezixhobo ezibonelelwe kwiSiza sethu
Ukuphucula indawo yethu
Sinokusebenzisa ingxelo oyinikelayo ukuphucula iimveliso kunye neenkonzo zethu.
Sinokusebenzisa ulwazi abaSebenzisi abanikezela ngalo ngokwabo xa bebeka iodolo kuphela ukubonelela ngenkonzo kuloo oda. Asabelani ngalolu lwazi namaqela angaphandle ngaphandle kwesilinganiselo esifanelekileyo sokubonelela ngenkonzo.
Ukuthumela ii-imeyile ngamaxesha
Sinokusebenzisa idilesi ye-imeyile ukuthumela ulwazi loMsebenzisi kunye nohlaziyo malunga nomyalelo wabo. Ingasetyenziselwa ukuphendula imibuzo yabo, imibuzo kunye / okanye ezinye izicelo. Ukuba uMsebenzisi uthatha isigqibo sokungena kuluhlu lwethu lokuposa, baya kufumana ii-imeyile ezinokubandakanya iindaba zenkampani, uhlaziyo, imveliso ehambelana nayo okanye ulwazi lwenkonzo, njl njl. Njlnangaliphi na ixesha umsebenzisi angathanda ukuzikhupha ekufumaneni ii-imeyile ezizayo, sibandakanya iinkcukacha Ungabhalisi imiyalelo emazantsi e-imeyile nganye okanye uMsebenzisi anganxibelelana nathi kwiSayithi yethu.
Silukhusela njani ulwazi lwakho
Samkela ukuqokelelwa kweenkcukacha ezifanelekileyo, ukugcina kunye nokwenza iinkqubo zokhuseleko kunye nokukhusela ukufikelela ngokungekho mthethweni, ukutshintsha, ukubhengeza okanye ukutshabalalisa ulwazi lwakho lomntu, igama lomsebenzisi, iphasiwedi, ulwazi lwentengiselwano kunye nedatha egcinwe kwiSiza sethu.
Utshintshiselwano lwedatha eyimfihlo kunye neyabucala phakathi kweSayithi kunye naBasebenzisi bayo kwenzeka kwisiteshi sokunxibelelana esikhuselekileyo se-SSL kwaye ivaliwe kwaye ikhuselwe ngesiginesha yedijithali.
Ukwabelana ngolwazi lwakho
Asithengisi, asithengisi, okanye siqeshe Abasebenzisi ulwazi lokuzazisa lobuqu kwabanye. Singabelana ngolwazi olujolise kumanani abantu abangahambelani naluphi na ulwazi oluchazayo malunga neendwendwe kunye nabasebenzisi kunye namaqabane ethu eshishini, abathengisi abathembekileyo kunye nabathengisi ngeenjongo ezichazwe apha ngasentla. Sinokusebenzisa ababoneleli beenkonzo besithathu ukusinceda ekuqhubeni ishishini lethu kunye neSiza okanye Ukulawula imisebenzi egameni lethu, njengokuthumela iileta zeendaba okanye uphando. Singabelana ngolwazi lwakho kunye nabantu besithathu ngezi njongo zincinci xa usinike imvume.
Abasebenzisi banokufumana intengiso okanye ezinye izinto kwiSayithi yethu enxibelelana nesiza kunye neenkonzo zamaqabane ethu, abathengisi, abathengisi, abaxhasi, abaniki layisensi kunye nabanye abantu besithathu. Asilawuli umxholo okanye amakhonkco avela kwezi sayithi kwaye anoxanduva lokuziqhelanisa nokuqeshwa kweewebhusayithi ezinxibelelene okanye kwiSayithi yethu. Ukongeza, ezi sayithi okanye iinkonzo, kubandakanywa imixholo yazo kunye nokunxibelelana, inokuba ihlala itshintsha. Ezi ndawo kunye neenkonzo zinokuba nemigaqo-nkqubo yazo eyimfihlo kunye nemigaqo-nkqubo yabathengi. Ukukhangela kunye nokusebenzisana nakweyiphi na enye iwebhusayithi, kubandakanywa newebhusayithi enokunxibelelana neSayithi yethu, kuxhomekeke kwimigaqo-nkqubo kunye nale nkqubo yewebhusayithi.
IFyrebox Quizzes Ltd inengqiqo yokuhlaziya lo mgaqo-nkqubo wabucala nangaliphi na ixesha. Xa sisenza, siza kuhlaziya umhla ohlaziyiweyo emazantsi eli phepha kwaye sikuthumelele i-imeyile. Sikhuthaza abaSebenzisi ukuba bajonge eli phepha rhoqo ngalo naluphi na utshintsho ukuze bahlale benolwazi malunga nendlela esinceda ngayo ukukhusela ulwazi lomntu esiqokelela. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba luxanduva lwakho ukuphononongwa ngalo mgaqo-nkqubo wabucala rhoqo kwaye wazi uhlengahlengiso.
Ukwamkelwa kwakho kwezi meko
Ngokusebenzisa le Ndawo, ubonakalisa ukwamkela kwakho le polisi kunye nemigaqo yenkonzo. Ukuba awuvumelani nalo mgaqo-nkqubo, nceda ungasebenzisi iSayithi yethu. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa indawo emva kokuthumela utshintsho kule polisi kuya kuthathwa njengokuvuma kwakho olo tshintsho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nale Mgaqo-nkqubo wabucala, iinkqubo zale ndawo, okanye ukusebenzisana kwakho nale ndawo, nceda unxibelelane nathi kule nombolo:
UMZANTSI WESITHILI, 3006
Olu xwebhu lwagqitywa ukuhlaziywa ngo-Matshi 9, 2020
Ulwimi EnglishFrançaisEspañolDeutschРусскийالعربيةעבריתελληνικάPortuguês中国ItalianoNederlandsTiếng ViệtDansk한국어Melayuไทย日本語TürkçePolskieMagyarČeskýNorskBahasa Indonesiaខ្មែរУкраїнськийSvenskaбългарскиEestiHrvatskiLietuviųFilipinoSlovakRumunskiSuomiÍslenskuहिंदीLatviešuCatalàEuskalSrpskiBosanskiNorsk (Bokmål)հայերենລາວSlovenščinaAfrikaans普通話LatineБеларусCebuanoCorsuCymraegEsperantoفارسیGaeilgeGàidhlig na h-AlbaGalegoŌlelo HawaiʻiKreyòl AyisyenBasa JawaქართულიҚазақKurdîLëtzebuergeschMaoriМакедонскиМонголMaltiဗမာनेपालीਪੰਜਾਬੀپښتوSamoaSoomaaliUrang SundaKiswahiliதமிழ்اردوO'zbekייִדישzuluአማርኛAzərbaycanবাঙালিFryskગુજરાતીHausaHmongNdi Igboಕನ್ನಡКыргызчаMalagasyമലയാളംमराठीChichewaSesothoShonaسنڌيසිංහලТочикతెలుగుisiXhosaYoruba